Warshadda Shiinaha Dabaqa Shiinaha iyo soosaarayaasha | Jinqiu
Suufyada dabaqa midabkoodu kala duwan yahay waxay leeyihiin adeegsiyo kala duwan, oo dhammaan suufka waa inaan loo isticmaalin nooc kasta oo dabaq ah. Hadda aan kuu soo bandhigo si faahfaahsan si aad u hesho suufka ugu habboon.
Qalabka nylon / Polester.
25mm dhumuc ku filan
Isticmaal cad oo lagu nadiifiyo dabaqyada la ilaaliyo.
U isticmaal casaan nadiifinta buufinta caadiga ah dabaqyada la ilaaliyo.
Isticmaalka madow ee nadiifinta qoto dheer, iyo dabaqyada dhagxaanta warshadaha.
Shayga C101B C101D
Cabir 17 ” 20 ”
Xirxirida 5pcs / ctn 5pcs / ctn
Cabbirka 440x130x440mm 515x130x515mm
Miisaanka guud Caddaan 1kg, Casaan 1.1kg, madow1.6kg Caddaan 1.6kg, Casaan 1.7kg, madow2.3kg
Suufka sagxada midabka guduudan waxaa loogu talagalay suufka dhulka lagu keydiyo ee ka saari kara astaamaha khafiifka ah iyo wasakhda, wuxuuna ka dhigayaa dabaqa dhalaalaya iyo dhalaalka dhalaalaya. Waxay ku habboon tahay isticmaalka waajibaadka fudud maadaama aysan waxyeello u geysan doonin dabaqyadaada. Waxay sidoo kale ku habboon yihiin shaqada nadiifinta ee maalinlaha ah iyo mashiinka cadayashada ee xawaaraha yar. Suufka guntinta cas waxaa loo yaqaanaa ugu dagaal badan waxaana loo isticmaali karaa qalajin ama lagu buufiyo buufin.
Midabka cad waxaa loogu talagalay nadiifinta suufka kaas oo ah suufka dhulka ugu jilicsan, oo ku habboon shaqooyinka maalinlaha ah aad u badan. Isticmaal suuf cad oo wax lagu nadiifiyo oo leh nabar yar oo xawaare hooseeya iyo ceeryaamo biyo fiican, waxay ka dhigi kartaa dabaqyadaada kuwo jilicsan oo dhalaalaya. Suufyada waa in loo isticmaalaa sagxad nadiif ah, oo nadiif ah si loogu daro wax jilicsan marka la dhammeeyo. Suufka cad ee wax lagu nadiifiyo kuma sii nagaan doono dusha sare ee textured, kumana haboona mashiinada xawaaraha sare leh
Marinnada sagxadda midabka madow oo ah midabka istaariska ah ee guntinta, waxay gebi ahaanba ka saari karaan dhammaadka, shaabad ku xireyaasha, waxsoosaarka iyo wasakhda si aad dhulkaaga u hagaajiso. Iyagu waa kuwo dagaal badan oo xoqan waana in loo adeegsadaa mashiinno xawaare hoose ku socda.
Marka la soo bandhigo midabka iyo shaqada suufka sagxadda, waxaan lahaan doonnaa faham cusub oo ku saabsan doorashada suufka, waxaan aaminsanahay inaad u dooran karto sheyga saxda ah ee dabaqaaga. Haddii kuwani aysan daboolayn baahiyahaaga dabaqa, fadlan nala soo xiriir, waxaan u habeyn karnaa si waafaqsan shuruudahaaga.
Hore: Suufinta Nadiifinta Nadiifinta
Xiga: Dhogorta birta ah
Dhogorta birta ah
Suufinta Nadiifinta Nadiifinta